झण्डै ५ करोडको लागतमा प्रहरीको भवन निर्माण हुदै
झण्डै ५ करोड रुपैयाँको लागतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको कार्यालय परिसरमा एकै पटक चार वटा भवनको निर्माण कार्य थालिएको छ ।
करिब ६ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा ब्यारेक, हिरासत, सिनियर प्रहरी आवास र भान्छा घर भवनको निर्माण कार्य भईरहेका छन् । ब्यारेक, हिरासत कक्ष र भान्छाघर निर्माणको लागि रु.तीन करोड ४६ लाख पाँच हजार एक सय ५६ र सिनियर प्रहरी आवासको लागि रु.एक करोड २६ लाख २२ हजार ६० रकम गरी चार करोड ७२ लाख २७ हजार दुई सय १६ रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
प्रहरीहरु अस्थायी र जोखिमयुक्त कच्ची भवनमा सुत्नु र हिरासत कक्ष साँघुरो रहेकोले थुनुवा राख्न समस्या हुदै आएकोले नेपाल सरकारको सहयोगमा भवन निर्माण कार्य थालिएको हो । जिप्रका तनहुँका डिएसपी युवराज तिमिल्सिनाले बताए । भवन निर्माण पश्चात ती सबै समस्या सहज हुने कार्यालयले जनाएको छ । जस्तापाताको छाना भएको कच्ची भवन पनि प्रहरीलाई बस्न सुत्नको लागि पर्याप्त मात्रामा स्थान नहुँदा समस्या हुने गरको डिएसपी तिमिल्सिनाले बताए ।
उक्त तीन वटा भवनको निर्माण जिम्मा न्यू ड्रागन निर्माण सेवा काभ्रेले पाएको छ । बिसं ०७६ मंसिर ९ गते सम्झौता गरेको उक्त कम्पनीले बिसं ०७७ मंसिर ८ गते भित्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।
तीन ढलानको उक्त ब्यारेक भवन दुई सय जना क्षमताको रहने छ भने हिरासत एक ढलानको हुने छ । हिरासत कक्ष भने करिब ५० जना क्षमताको रहेको जिप्रकाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चार कोठाको हिरासत कक्ष मध्ये तीन वटा पुरुष र एक कोठा महिलाको लागि प्रयोग गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी सिनियर प्रहरी आवास भवन निर्माणको जिम्मा पव्लिक कन्ट्रक्सन प्रा.लि.ले पाएको छ । बि.सं. ०७७ असार १ गते सम्झौता गरी बिसं ०७८ जेठ मसान्त भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त भवन साढे दुई ढलानको निर्माण गरिनेछ ।
२ थान पेस्तोल सहित गुरुङ पक्राउ
यसैबीच तनहुँ प्रहरीले हतियार सहित वन्यजन्तु सामाग्री सहित १ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका डिएसपी युवराज तिमिल्सेनाले जानकारी दिए अनुसार पक्राउ पर्नेमा बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ ज्यामिरे बस्ने ४० बर्षिय अशोक गुरुङ रहेका छन् । गुरुङको साथबाट दुईथान पेस्तोल र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित सामाग्री बरामत गरिएको छ ।
Previous Previous post: पोल्याङबासीको सपना साकार हु“दै
Next Next post: काँग्रेसका जनप्रतिनिधीले गरे दशै भत्ता वापतको रकम कोरोना कोषमा जम्मा